Caleemaha dhasha | December 2019
Bannaanka u badan iyo kuwa haysta dabaqado gaar ah, xayawaanka xoolaha guriga. Iyada oo ay joogaan saldhig fatuxeed ku filan si ay ugu lug yeeshaan xayawaanku ma aha mid aad u adag, gaar ahaan maaddaama faa'idooyinka xirfadahan oo kale ay yihiin kuwo la taaban karo. Adigu maaha kaliya inaad bixiso hilib, laakiin waad ogtahay waxkasta oo ku saabsan asalkiisa.
Nooca ugu caansan ee shimbiraha
Qeyb kasta oo gaar loo leeyahay waxaa ku yaal digaagga digaagga halkaas oo digaagga ku nool yihiin. Laakiin dad badan ayaa aaminsan in hilibka digaagu uu noqdey maalin kasta, laakiin hilibka duurkana waxaa loo tixgeliyaa xasaasiyad. Nasiib wanaag kasta oo beeraley ah ayaa isku dayaya in ay koraan shimbirahooda gudaha ah. Si sax ah u samee doorasho ku saabsan taranta mid ama mid kale oo shimbir ah, waxaad si fiican u siin kartaa miiskaada hilibka dhadhanka leh, iyo sidoo kale sameyso lacag aad u fiican.
Duck Bashkir waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee ukunta iyo hilibka. Intaa waxaa dheer, waxa aan la qabin ee daryeelka, raqiis ah oo waxaa lagu gartaa difaac adag iyo dulqaad. Tilmaamaha sii kordhaya ee Duck Bashkir, faa'iidooyinkeeda iyo faa'iido darrida ayaa looga doodi doonaa arrintan. Tixgelinta dhalashada La kulan digaagga ayaa ka bilaabanaya sharaxaad kooban.
Sidee loo naqshadeeyaa nuucda buluuga ah ee guriga
Maanta waxaan bixinnaa inaan si taxadar leh u eegno caanaha buluugga ah ee ka dhexjirta beeraleyda ee ku jira shimbiraha gudaha ee gudaha ah: si aad u ogaatid muuqaalada kala duwan ee duck, sharaxaadda mudnaanta iyo sawirrada kala duwan. Faa'iidada buluuga ah waa mid ka mid ah ducks oo dhowaan soo gashay suuqa waxaana uu helayaa qadar gaar ah oo beeraleyda ah.
Sidee loo dhigaa hurdada Star-53 ee guriga
Mawduuca mawaadiicda maanta waxa weeye duufaan dabiici ah 53-jir, kaas oo sidoo kale loo yaqaan "duck Peking". Tani waa bedel weyn oo ah ducks caadiga ah ee caadiga ah, maaddaama u janjeedhka udhaqaaqida hab nololeed caafimaad leh waxay nagu dhiirrigelisaa in aan diidno cuntada dufanka leh. Duck Peking siinayaa xaddi badan oo dhadhan fiican leh, laakiin ma hilib dufan, taas oo ah tayada cuntada kala duwan.
Haddii aad ku cusub tahay warshadaha digaaga oo aad go'aansatid inaad bilowdo waayo-aragnimadaada naas-nuujinta, "feker" waa habka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo! Tani waa caleemo hore oo la xaqiijiyay oo ah digaag hilib ah, taas oo si guul leh loogu isticmaalo taranta taranka taranka cusub iyo noocyo badan oo cusub.Ducks kuwaas oo dhan meel kasta oo labadaba ku jira miisaanka warshadaha iyo beeraha yaryar, oo ay ku kasbadeen faan wanaagsan oo ay ugu mahad celinayaan qabsashadooda, koritaanka degdegga ah iyo hilibka dheelitiran oo wanaagsan.
Duufaanta Gogol waa shimbir ka mid ah qoyska duck oo leh degaan aad u ballaaran oo xogta dibedda ah, taas oo loo aqoonsan yahay mid ka mid ah noocyada ugu quruxda badan ee qoyskiisa. Halka shimbirkan xajiya, waxa ay ku quudinayso iyo waxa ay yihiin sifooyinka hab nololeedkooda - kuwan iyo arrimo kale ayaa loo tixgelin doonaa maqaalkan. Tilmaamaha iyo dabeecadaha noocyada ah Gogoolka caadiga ah waa nuuc-nasiib dhexdhexaad ah oo leh dabeecado dibadda ah.
Nuucyada kala geddisan ee goos goos ah: sharaxaad ka mid ah shimbir mulki Mulard ah
Noocyada digaaga ee dhirta ayaa lagu soo koobay si loo hagaajiyo tilmaamayaasha waxqabadka, si loogu daro mudnaanta dhowr nooc, si loola tacaalo faa'iidooyinka. Maqaalkani waa midka loo yaqaan 'Mulard Mulbrid', waxaannu ku baran doonaa taariikhda iyo sharaxaadda of breed, iyo sidoo kale qarsoon ee sii kordhaya. Taariikhda Dhalashada Ereyga "mulard" waxaa laga amaahiyaa luuqada ingiriis waxaana laga soo qaataa magacyada "Muscovy duck" iyo "mallard", taas oo micnaheedu yahay duur iyo mallaar.
Bashkir Ducks: Noocyada, Aragtida iyo Caqliyada
Miyuu beerta beereed kasta si dhakhso ah u helaa goor dambe si loo go'aamiyo su'aasha ah nooca digaaggu waa iftiin iyo dhaqaale ee beerista iyo dayactirka. Haddii aad hore u haysatid ama haysatey digaagga, turkiga, berriga, ducks, gaar ahaan wakiilada caanaha Bashiir, sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan ee hilibka iyo ukunta.
Duck cad cad: sifeynta iskutallaabta, ishortaarka guriga lagu hayo
Doogga Blagovarskaya waa shimbir, ma aha oo kaliya qurxinta deyrka leh muuqaalkiisa soo jiidasho, laakiin sidoo kale wuxuu awoodaa inuu ku farxo tiro badan oo ah ukun iyo hilib dhadhan fiican leh. Waxyaabaha sahlan iyo rabitaan la'aanta waxay ka dhigtaa mid ku habboon beeralayda iyo beeraha. Xasilinta xasiloonida, wax soo saarka wanaagsan, caabuqa cudur - dhamaantani waxay ka dhigaysaa duck mid digaag ah oo cajiib ah.
Dareemka duufaanku waa: Noocyada taranta ee guriga
Ereyga "broiler" ayaa markiiba soo celiya digaagga, si kastaba ha ahaatee, ducks sidoo kale waxay leeyihiin ilo hore. Mid ka mid ah kuwan waa duufka cad ee barafka cad. Wakiillo ka socda wadankan kakooban ayaa si fiican ugu koraan beeraha iyo guriga. Tilmaamaha iyo muuqaalada kala duwan ee loo yaqaan 'Ago nail', waa nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee kala duwan, waxay isku darsamayaan faa'iidooyinkooda ugu weyn.
Noocyada ducks Cayuga: sida loo daryeelo iyo sida loo quudiyo guriga
Cayuga ee aadka u quruxda badan ee Cayuga waa mid soo noqnoqonaya bandhigyo dalxiis oo caalami ah oo kala duwan. Tani ma aha mid la yaab leh, sababtoo ah waxay uumiga madow oo gaar ah oo leh cagaar cagaaran oo ciriiri ah oo caan ah ayaa ka dhigaya mid gaar ah oo ka mid ah noocyada kale. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalka ma aha faa'iidada kaliya ee shimbir, waxa kale oo uu leeyahay heerarka sare ee wax soo saarka, waxaa si fiican loo qaaday, iyo hilibkiisu wuxuu leeyahay dhadhan jilicsan, jilicsan oo dhadhan.
Tilmaamaha nuucyada duck
Marka go'aan laga gaarayo in la gooyo ducks guri, ugu horreyntii waa lagama maarmaan in la go'aamiyo caleemaha, sababtoo ah waxay ku xiran tahay gobolka, noocyada oo dhan ma dareemi karaan wanaag. Cross Temp waa wakiil cad-baraf cad oo ka mid ah qoyska duck, kuwaas oo dareemaya weyn ee dhulka Ukraine, Ruushka iyo Belarus.
Doomaha runta ah ee Hindiya (ordaaraha): qaababka taranka guriga
Sanadihii la soo dhaafay, xiisaha abuurista dukumiinti aan caadi ahayn ee Hindiya iyo beeraleyda iyo beeraleyda digaaga ayaa si weyn u koray. Tani ma aha wax la yaab leh, sababtoo ah shimbir waxay leedahay ukun qurux badan oo caan ku ah caan u ah dhadhan aad u fiican, casiir leh oo hilib ah. Si kastaba ha ahaatee, barbaarinta ducks waxay ku guuleysan doontaa oo keliya haddii shuruudaha iyo shuruudaha qaarkood lagu arkay.
Waa maxay nooca ducks?
Mararka qaar xulashada shimbir shimbirta ah ee taranka taranka ayaa noqda dhibaato, sababtoo ah adduunka waxaa jira ilaa 84. Waxaan ku talineynaa in aan si cad u qeexno ujeedooyinka shimbiraha. Haddii ujeedada ugu weyni tahay in la helo hilib, markaas waxaa habboon in la doorto noocyada hilibka. Haddii aad rabto in aad ukumo ka hesho shimbiraha, markaa waxaad u baahan tahay inaad eegto ukunta ukunta.
Ka ilaalinta iyo taranka shubanka guriga dhexdiisa
Waxaa jira qayb ka mid ah shimbiraha oo aan kor loogu qaadin hilibka ama ukunta, laakiin sababtoo ah codkooda qayaxan iyo qallafsan - kuwani waa ducks ducks. Waxay yihiin caawiyeyaal udeedeyaal ah si ay u qabtaan ducks duurjoogta ah, iyaga oo soo jiidanaya calaamado dhawaaqa. Aynu wax badan ka baranno sida loo doorto, daryeelka iyo jinsiyada sida shimbiraha sida.
Sidee loo gooyaa digaagaha broiler guriga
Bacriminta waxaa loogu yeeraa iskudhaf farsamo ah oo la isku dhexdhigo xoolaha oo ka tirsan jihada hilibka. Shimbiraha Broiler, sida digaagga, si deg deg ah u kordha miisaanka, kaas oo u ogolaanaya 1.5 bilood ka dib iibka maalin kasta ducklings si uu u helo qof qaangaar ah miisaanka ugu sareeya. Kadibna waxaan ka hadli doonaa doorashada xayawaanka dhallinyarada ah iyo abuurista xaaladaha lagama maarmaanka u ah dayactirka.
Mararka qaarkood barkadaha magaalada ama qoysaska gaarka loo leeyahay, shimbiraha quruxda badan ee rinjiga aan caadiga ahayn waxaa laga heli karaa. Shimbir weyn oo weyn ayaa soo jiidata, iyo dadku waxay badanaa ka yaabsadaan asalkiisa iyo hoygiisa. Maanta ee maqaalka ah waxaan si faahfaahsan u sheegi doonaa duck cas iyo cowska. Asalka iyo qaybinta Red Duck, ama Ogar, waa wakiil ka tirsan qoyska Duck, ee Anseriformes.
Sharaxaad ka mid ah cawl gruck Ukran caan ah
Ma aha oo kaliya in beeraha digaagga, laakiin sidoo kale in meelo badan oo wada jir ah leh digaagga inta badan ku jira ducks. Kala duwan ee dhagaxyada waa weyn. In maqaalkani waxaan ka hadli doonaa duufaanka ukrain ee ciriiriga ah. Asalka asaasiga ah ee duufaanka Ukuntu Duck waxay u leedahay asal ahaan asal ahaan takhasus u leh Machadka Cilmi baarista Ukraine ee Beeraha Beeraha.
Sharaxaad ka mid ah broiler waxay soo saaraan ducks
Beeralayda digaaga ee ugu caansan waa digaagaha broiler. Waxay si deg deg ah u kordhaan mass, uma baahnid in aad maalgashato wax badan oo ku saabsan content of shimbiraha, waxay bixiyaan hilibka iyo dhadhan fiican leh dhadhan fiican leh. Aan u fiirsanno waxa kudhaca nuucyada caadiga ah ee duurjoogayaasha waa, sida loo abuuro oo si habboon u daryeelo iyaga.
Geedka Ilaah (Gormuud): bogsashada guryaha, isticmaalka, ka hortaga
Made Just Maria
Boqoshaada caleenta jiilaalka
Kala duwanaansho "Thumbelina" waa noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah. Isteroberyadu waa kuwo yaryar, simmetrical ah. Darajada waxaa lagu dabaqaa diyaarinta guriga iyo daawada dhaqameed. Astami ah oo ku jira maaddada amino acids. Waxaa lagugula talinayaa isticmaalka carruurta iyo dadka caafimaadka qaba. Waa noocee? Kalluunka "Thumbelina" magaciisa ayaa ugu mahad celiyay geedka yar iyo miraha yar yar. Read More
Ganacsigu faa'iido ma leh - miro dhaadheer oo ku shaqeeya qiyaasta warshadaha? Wax kasta oo ku saabsan shirkadan